ASUAFO no bɔɔ hu. Na wɔretwa Galilea Po no bere a ahum tu baa wɔn so mpofirim no. Akyinnye biara nni ho sɛ na wɔahu ahum a etu wɔ ɔtare yi so pɛn—efisɛ na wɔn mu binom yɛ apofofo a wɔn ho akokwaw. * (Mateo 4:18, 19) Nanso na eyi yɛ “ahum kɛse,” na ɛmaa po no yɛɛ basabasa ntɛm ara. Mmarima no yeree wɔn ho denneennen sɛ wɔbɛhare ɔkorow no, nanso na ahum no regye wɔn nsam. Asorɔkye a na ɛrebubu no “beguu ɔkorow no mu,” na na nsu no reyɛ ayɛ ma. Basabasayɛ yi nyinaa akyi no, esiane sɛ na Yesu akyerɛkyerɛ nkurɔfo akuwakuw saa da no abrɛ nti na wada hatee wɔ ɔkorow no to. Bere a na asuafo no suro sɛ wobetumi ahwere wɔn nkwa no, wonyan no srɛɛ no sɛ: “Awurade, gye yɛn, na yɛreyera!”—Marko 4:35-38; Mateo 8:23-25.
2 Ná Yesu nsuro. Ɔde ahotoso a emu yɛ den kaa mframa ne ɛpo no anim sɛ: “Mua w’ano, yɛ komm!” Ntɛm ara, mframa no ne ɛpo no tiei—basabasa no gyaee, asorɔkye no yɛɛ komm, na “ɛyɛɛ dinn.” Afei ehu kɛse kaa asuafo no. Wosisee wɔn ho sɛ: “Onipa bɛn ara ni?” Nokwarem no, onipa bɛn na obetumi aka mframa ne ɛpo anim sɛnea ɔreteɛ abofra a ɔreyɛ asoɔden so no?—Marko 4:39-41; Mateo 8:26, 27.
3 Nanso, na Yesu nyɛ onipa biara kɛkɛ. Ná Yehowa tumi wɔ ne so, na ɛnam no so yɛɛ adwuma wɔ akwan a ɛyɛ nwonwa so. Ɛfata sɛ ɔsomafo Paulo a honhom kaa no no tumi kaa ne ho asɛm sɛ “Kristo, Onyankopɔn tumi” no. (1 Korintofo 1:24) Akwan bɛn so na Nyankopɔn tumi daa adi wɔ Yesu so? Na nkɛntɛnso bɛn na tumi a Yesu de di dwuma no betumi anya wɔ yɛn asetra so?
4 Susuw tumi a na Yesu wɔ ansa na ɔreba asase so sɛ onipa no ho hwɛ. Yehowa de n’ankasa “daa tumi” no yɛɛ adwuma bere a ɔbɔɔ ne Ba a ɔwoo no koro a wɔbɛfrɛɛ no Yesu Kristo no. (Romafo 1:20; Kolosefo 1:15) Ɛno akyi no, Yehowa de ahoɔden ne tumi kɛse maa ne Ba yi, na ɔde N’adebɔ nnwuma hyɛɛ ne nsa. Ɛdefa Ɔba no ho no, Bible ka sɛ: “Ɛnam no so na wɔyɛɛ ade nyinaa, na wɔankwati no anyɛ biribiara a wɔyɛe.”—Yohane 1:3.
5 Yentumi nhu sɛnea saa adwuma no kɛse te. Susuw tumi a na ohia de abɔ abɔfo a wɔwɔ tumi no, amansan yi ne ne nsoromma akuw ɔpepepem pii no, ne asase ne n’abɔde ahorow a nkwa wom no ho hwɛ. Na Ɔba a ɔwoo no koro no wɔ tumi a ɛsen biara wɔ amansan yi mu—Onyankopɔn honhom kronkron no—a na ɛbɛma watumi ayɛ saa nnwuma no. Ɔba yi ani gyei kɛse sɛ ɔyɛ Odwumayɛni a Waben, a Yehowa de no dii dwuma ma ɔbɔɔ nneɛma foforo nyinaa.—Mmebusɛm 8:22-31.
6 So na Ɔba a ɔwoo no koro no betumi anya ahoɔden ne tumi a ɛsen saa koraa? Wɔ Yesu asase so wu ne ne wusɔre akyi no, ɔkae sɛ: “Wɔde ɔsoro ne asase so tumi nyinaa ama me.” (Mateo 28:18) Yiw, na wɔama Yesu ahoɔden ne hokwan sɛ onni tumi wɔ amansan yi nyinaa so. Sɛ́ “Ahene mu hene ne awuranom mu Awurade” no, wɔama no tumi sɛ ontu “ahenni ne ahoɔden ne tumi nyinaa,”—nea wohu ne nea wonhu—a ɛsɔre tia N’agya no nyinaa ‘ngu.’ (Adiyisɛm 19:16; 1 Korintofo 15:24-26) Onyankopɔn ‘annyaw biribiara a wamfa anhyɛ’ Yesu ase—gye Yehowa ankasa.—Hebrifo 2:8; 1 Korintofo 15:27.
7 So ɛsɛ sɛ yedwen ho sɛ ebia Yesu de ne tumi no bedi dwuma ɔkwammɔne so? Dabida! Yesu dɔ N’agya ankasa, na ɔrenyɛ biribi a ɛnsɔ n’ani da. (Yohane 8:29; 14:31) Yesu nim yiye sɛ Yehowa mfa ade nyinaa so tumi a ɔwɔ no nni dwuma ɔkwammɔne so da. Yesu ahu ankasa sɛ Yehowa hwehwɛ hokwan ahorow a “ɔde ne denyɛ bedi ama wɔn a wɔn koma di mu wɔ ne ho no.” (2 Beresosɛm 16:9) Nokwarem no, Yesu wɔ ɔdɔ a N’agya wɔ ma adesamma no bi, enti yebetumi anya ahotoso sɛ Yesu de ne tumi bɛyɛ adepa bere nyinaa. (Yohane 13:1) Yesu wɔ kyerɛwtohɔ pa wɔ eyi mu. Ma yensusuw tumi a na ɔwɔ bere a na ɔwɔ asase so ne sɛnea ɛkaa no ma ɔde dii dwuma no ho nhwɛ.
8 Ɛda adi sɛ Yesu anyɛ anwonwade biara bere a na ɔyɛ abarimaa a na ɔrenyin wɔ Nasaret no. Nanso, ɛno sesae bere a wɔbɔɔ no asu wɔ afe 29 Y.B. mu, bere a na wadi mfirihyia 30 no. (Luka 3:21-23) Bible ka kyerɛ yɛn sɛ: “Onyankopɔn de Honhom Kronkron ne tumi sraa no, na okyinii yɛɛ yiye, na ɔsaa wɔn a ɔbonsam hyɛɛ wɔn so no yare.” (Asomafo no Nnwuma 10:38) So asɛm “yɛɛ yiye” no—nkyerɛ sɛ Yesu de ne tumi dii dwuma ɔkwampa so? Bere a wɔsraa no akyi no, ‘ɔbɛyɛɛ odiyifo a ɔwɔ tumi wɔ nneyɛe ne ɔkasa mu.’—Luka 24:19.
9 Ɔkwan bɛn so na na Yesu wɔ tumi wɔ ɔkasa mu? Na ɔtaa kyerɛkyerɛ wɔ petee mu—atare ne mmepɔw ho, mmɔnten ne gua so. (Marko 6:53-56; Luka 5:1-3; 13:26) Sɛ na ne nsɛm no nyɛ n’atiefo no dɛ a, anka wobetumi afi hɔ akɔ wɔn baabi ntɛm pa ara. Bere a na womfii nhoma tintim ase no, na ɛsɛ sɛ atiefo a wɔn ani gye asɛm no ho no de ne nsɛm no sie wɔn tirim ne wɔn koma mu. Enti na ɛsɛ sɛ Yesu nkyerɛkyerɛ no yɛ nea etumi twetwe adwene, wotumi te ase yiye, na ɛnyɛ den sɛ wɔbɛkae. Nanso, asɛyɛde yi anyɛ Yesu den. Sɛ nhwɛso no, susuw ne Bepɔw so Asɛnka no ho hwɛ.
10 Afe 31 Y.B. mfiase anɔpa bi, nkurɔfokuw bi hyiaam wɔ bepɔw bi a ɛbɛn Galilea Po no ho. Ná wɔn mu bi fi Yudea ne Yerusalem a ɛwɔ akyirikyiri kilomita 100 kosi 110 na aba. Afoforo fi Tiro ne Sidon mpoano a ɛwɔ atifi fam no na ɛbae. Ayarefo pii bɛn Yesu bɛkaa no, na ɔsaa wɔn nyinaa yare. Bere a anka wɔn mu biako mpo a na ɔyare denneennen no, ofii ase kyerɛkyerɛɛ wɔn. (Luka 6:17-19) Bere a owiee kasa akyi no, nea wɔtee no maa wɔn ho dwiriw wɔn. Dɛn ntia?
11 Mfe bi akyi no, obi a ɔtee saa kasa no kyerɛwee sɛ: “Ne kyerɛkyerɛ no maa nkurɔfo akuwakuw no ho dwiriw wɔn, efisɛ ɔkyerɛkyerɛ wɔn sɛ nea ɔwɔ tumi.” (Mateo 7:28, 29) Yesu de tumi a ebetumi ama wɔate nka na ɛkasae. Ogyinaa Onyankopɔn ananmu kasae, na ɔde ne nkyerɛkyerɛ no gyinaa Onyankopɔn Asɛm mu tumi so. (Yohane 7:16) Ná Yesu nsɛm no mu da hɔ, n’afotu dan ti, na na wontumi nnye n’asɛm ho kyim. Ne nsɛm no tumi kyerɛkyerɛɛ nneɛma mu kosii ase, na na otumi du n’atiefo koma mu. Ɔkyerɛkyerɛɛ wɔn sɛnea wobetumi anya anigye, sɛnea wɔbɔ mpae, sɛnea wɔhwehwɛ Onyankopɔn Ahenni, ne sɛnea wɔto fapem ma daakye. (Mateo 5:3–7:27) Ne nsɛm no kanyan wɔn a nokware ne trenee ho kɔm de wɔn no koma. Na saafo no wɔ ɔpɛ sɛ ‘wɔbɛpa wɔn ho akyi’ na wɔagyaw biribiara hɔ abedi n’akyi. (Mateo 16:24; Luka 5:10, 11) Yesu nsɛm a tumi wom ho adanse bɛn ara ni!
12 Na Yesu wɔ ‘tumi wɔ nneyɛe mu’ nso. (Luka 24:19) Nsɛmpa no bɔ anwonwade ahorow pɔtee bɛboro 30 a ɔyɛe ho amanneɛ—ne nyinaa wɔ ‘Yehowa tumi’ mu. * (Luka 5:17) Yesu anwonwade ahorow no kaa nnipa mpempem pii asetra. Anwonwade abien pɛ a ɔyɛe—nnipa 5,000, ne akyiri yi, nnipa 4,000 aduanma, a na “mmea ne mmofra nka ho” no kaa nnipa a ebia wɔn dodow bɛyɛ 20,000!—Mateo 14:13-21; 15:32-38.
13 Ná Yesu anwonwade no gu ahorow kɛse. Ná ɔwɔ adaemone so tumi, na otuu wɔn a wammrɛ ho. (Luka 9:37-43) Na ɔwɔ abɔde mu nneɛma so tumi, ɔdan nsu nsa. (Yohane 2:1-11) Ɔnantew Galilea Po a mframa bɔ so kɛse no so maa n’asuafo no ho dwiriw wɔn. (Yohane 6:18, 19) Na ɔwɔ yare so tumi, ɔsaa nipadua akwaa a adi dɛm, nyarewa a enni sabea, ne wɔn a na wɔda owupa so yare. (Marko 3:1-5; Yohane 4:46-54) Ɔsaa saa nyarewa no wɔ akwan pii so. Yesu saa ebinom a na wɔwɔ akyirikyiri yare, bere a afoforo de ɔno ankasa de ne nsa kaa wɔn. (Mateo 8:2, 3, 5-13) Wɔsaa ebinom yare mpofirim, na wɔsaa afoforo nso yare nkakrankakra.—Marko 8:22-25; Luka 8:43, 44.
14 Nea ɛyɛ nwonwa no, na Yesu wɔ tumi a ɔde beyi owu afi hɔ. Onyan awufo baasa wɔ mmere horow mu a wɔayɛ ho kyerɛwtohɔ. Onyan abeawa bi a na wadi mfirihyia 12 maa n’awofo, onyan ɛna kunafo bi ba a na odi no ba koro maa no, na onyan onuabarima bi a wɔdɔ no maa ne nuabeanom. (Luka 7:11-15; 8:49-56; Yohane 11:38-44) Tebea biara nni hɔ a ɛyɛɛ den maa no. Onyan abeawa a na wadi mfirihyia 12 a owui no fii owupa so. Onyan ɔbea kunafo no ba no fii funnaka mu, na akyinnye biara nni ho sɛ na ɛyɛ da a owui no ara. Na onyan Lasaro fii ɔboda mu bere a na wɔasie no nnanan no.
15 Sɛ wɔde Yesu tumi no maa sodifo bi a ɔnyɛ pɛ a, wunhu sɛ anka obetumi de adi dwuma ɔkwammɔne so? Nanso, Yesu anyɛ bɔne. (1 Petro 2:22) Wamma pɛsɛmenkominya, anuonyampɛ, ne anibere a ɛma nnipa de wɔn tumi pira afoforo no angu ne ho fĩ.
16 Yesu amfa ne tumi no anni dwuma pɛsɛmenkominya mu, na wamfa anni dwuma anhwehwɛ n’ankasa mfaso da. Bere a na ɔkɔm de no no, wannan abo abodoo anni. (Mateo 4:1-4) Agyapade kakraa bi a na ɔwɔ no yɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ wamfa ne tumi no anni dwuma ampɛ honam fam mfaso. (Mateo 8:20) Adanse foforo wɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ pɛsɛmenkominya adwene na ɛma ɔyɛɛ ahoɔdenne. Sɛ ɔyɛ anwonwade ahorow a, na ɔhwere biribi. Bere a ɔsaa ayarefo yare no, tumi fii ne mu. Bere a ɔsaa onipa biako mpo yare no, ɔtee sɛ tumi yi refi ne mu. (Marko 5:25-34) Nanso, ɔmaa nkurɔfokuw de wɔn nsa kaa no, na wɔn nyinaa nyaa ayaresa. (Luka 6:19) Ayamye bɛn ara ni!
17 Yesu de ne tumi no dii dwuma nyansam. Wanyɛ ahoɔdenne anaa ahwɛde ahorow a mfaso nni so amfa anhoahoa ne ho da. (Mateo 4:5-7) Wampɛ sɛ ɔbɛyɛ sɛnkyerɛnne de agye Herode ani wɔ adwemmɔne a na ɔde repɛ biribi ahu no ho. (Luka 23:8, 9) Sɛ́ anka Yesu bɛbɔ ne tumi ho dawuru no, mpɛn pii no, ɔka kyerɛɛ nkurɔfo a ɔsaa wɔn yare no sɛ wɔnnka nnkyerɛ obiara. (Marko 5:43; 7:36) Ná ɔmpɛ sɛ nkurɔfo gyina nsɛm a ɛkanyan adwene a wɔte so bɛkeka ne ho nsɛm.—Mateo 12:15-19.
18 Ná ɔbarima a ɔwɔ tumi yi, Yesu, nte sɛ sodifo pii a wɔadi tumi atirimɔden so a wɔabu wɔn ani agu afoforo ahiade ne wɔn amanehunu so no. Ná Yesu dwen nnipa ho. N’ani a ɛbɔɔ nnipa a na wɔrehu amane so kɛkɛ no kaa no kɛse ma oyii wɔn fii wɔn amanehunu mu. (Mateo 14:14) Osusuw wɔn nkate ne wɔn ahiade ho, na ɔdɔ mu a ofi susuw afoforo ho yi nyaa sɛnea ɔde ne tumi dii dwuma no so nkɛntɛnso. Yehu nhwɛso a ɛka koma wɔ Marko 7:31-37.
19 Saa bere yi de nkurɔfo akuwakuw no huu Yesu na wɔde ayarefo pii baa ne nkyɛn, na ɔsaa wɔn nyinaa yare. (Mateo 15:29, 30) Nanso, Yesu yii ɔbarima bi fii wɔn mu sɛnea ɛbɛyɛ a obedi ɔno nkutoo ho dwuma. Ná ɔbarima no yɛ ɔsotifo a na ɔpo dodow paa. Ɛbɛyɛ sɛ Yesu huu sɛnea na ɔbarima yi suro anaa ɔfɛre ade no. Yesu yɛɛ ade nyansam faa ɔbarima no—fii nkurɔfokuw no mu—kɔɔ nkyɛn wɔ kokoam baabi. Afei Yesu nam sɛnkyerɛnne bi a ɔyɛe so maa ɔbarima no huu nea na ɔrebɛyɛ no. Ɔde “ne nsateaa hyehyɛɛ n’asom, na ɔtoo ntasu de kaa ne tɛkrɛma.” * (Marko 7:33) Nea edi hɔ no, Yesu hwɛɛ soro, na oguu ahome bɔɔ mpae. Ná ɔbarima no bɛte adeyɛ yi ase sɛ, ‘Nea merebɛyɛ ama wo yi fi Onyankopɔn tumi mu.’ Awiei koraa no, Yesu kae sɛ: “Bue!” (Marko 7:34) Ɔkaa saa no, ɔbarima no aso buei, na otumi kasae yiye.
21 Ahoɔdenne a Yesu yɛe wɔ asase so no yɛɛ nhyira akɛse a ɛrebɛba wɔ n’ahenni nniso ase no ho sɛnkyerɛnne ara kwa. Wɔ Onyankopɔn wiase foforo no mu no, Yesu bɛyɛ anwonwade bio—na ɛbɛkɔ so wɔ wiase nyinaa! Susuw nneɛma a ɛyɛ anigye a ɛrebɛba no bi ho hwɛ.
22 Yesu besiesie asase so abɔde a nkwa wom ne wɔn asetra ma akari pɛ. Kae sɛ ɔdaa no adi sɛ ɔwɔ abɔde so tumi denam ahum a ɔma ɛyɛɛ komm no so. Ɛnde, akyinnye biara nni ho sɛ, wɔ Kristo Ahenni nniso ase no, ɛho renhia sɛ adesamma suro sɛ ahum, asasewosow, ogya bepɔw a ɛpae, anaa asiane foforo bɛhaw wɔn. Esiane sɛ Yesu yɛ Odwumayɛni a Waben a ɔno na Yehowa ma ɔbɔɔ asase ne ɛso nneɛma nyinaa nti, onim sɛnea asase te yiye. Onim sɛnea ɔde ɛso nneɛma bedi dwuma wɔ ɔkwan a ɛfata so. Wɔ ne nniso ase no, wɔbɛdan asase mu yi nyinaa Paradise.—Luka 23:43.
23 Na adesamma ahiade nso ɛ? Sɛnea Yesu tumi de nnuan kakraa bi maa nnipa mpempem pii ma wodi mee no ma yenya awerɛhyem sɛ ne nniso no beyi ɔkɔm afi hɔ. Nokwarem no, aduan pii a wɔbɛkyekyɛ ma obiara anya bi no beyi ɔkɔm afi hɔ koraa. (Dwom 72:16) Nyarewa so tumi a ɔwɔ no ka kyerɛ yɛn sɛ wɔbɛsa ayarefo, anifuraefo, asotifo, ne mpakye yare—koraa afebɔɔ. (Yesaia 33:24; 35:5, 6) Awufo a otumi nyanee wɔn no ma yenya awerɛhyem sɛ nea ɛka ne kɛseyɛ sɛ ɔsoro Hene ho ne tumi a ɔwɔ a ɔde benyan nnipa ɔpepem pii a yennim wɔn dodow a ɛyɛ N’agya anigye sɛ ɔbɛkae wɔn no.—Yohane 5:28, 29.
24 Bere a yɛresusuw Yesu tumi ho no, ma yɛnkae sɛ Ɔba yi suasua N’agya pɛpɛɛpɛ. (Yohane 14:9) Enti sɛnea Yesu de tumi di dwuma no ma yehu sɛnea Yehowa de tumi di dwuma no pefee. Sɛ nhwɛso no, susuw sɛnea Yesu fi tema mu saa ɔkwatani bi yare no ho hwɛ. Ɔbarima no yɛɛ Yesu mmɔbɔ ma ɔteɛɛ ne nsa kaa no sɛ: “Mepɛ.” (Marko 1:40-42) Yehowa nam kyerɛw nsɛm a ɛte sɛ eyi so reka sɛ, ‘Saa na mede me tumi di dwuma!’ So ɛnka wo mma wunyi ade nyinaa so tumfoɔ Nyankopɔn no ayɛ, na wonna no ase sɛ ɔde ne tumi di dwuma wɔ ɔdɔ mu saa?
^ nky. 12 Afei nso, ɛtɔ mmere bi a Nsɛmpa no ka anwonwade pii ho asɛm bom biako. Sɛ nhwɛso no, bere bi ‘kurow mu nyinaa’ baa ne nkyɛn, na ɔsaa ayarefo “bebree” yare.—Marko 1:32-34.
Yesaia 11:1-5 Ɔkwan bɛn so na Yesu da “mmaninyɛ honhom” adi, na ahotoso bɛn na yebetumi anya wɔ ne nniso no mu?
Marko 2:1-12 Yesu anwonwakwan so ayaresa no da no adi sɛ tumi bɛn na wɔde ama no?
Yohane 6:25-27 Ɛwom sɛ Yesu nam anwonwakwan so dii nkurɔfo honam fam ahiade ho dwuma maa wɔn de, nanso na dɛn ne ne som adwuma no botae titiriw?
Yohane 12:37-43 Dɛn nti na nnipa bi a wohuu Yesu anwonwade no nyaa ne mu gyidi, na dɛn na yebetumi asua afi eyi mu?